Abavelisi kunye neefektri zeFarm kunye neCosmetic - China abavelisi kunye nabaCwangcisi beZithambiso abavelisi
IGlycine CAS 56-40-6 kwiBakala lePharma (USP / EP / BP)
Igama Product: Glycine
Inkangeleko: Umhlophe wecrystalline powder
Iimpawu zeMveliso: Incasa emnandi, inyibilika ngokulula emanzini, inyibilika kancinci kwi-methanol kunye ne-ethanol, ingenakunyibilika kwi-acetone kunye ne-ether, indawo yokunyibilika: phakathi kwe-232-236 ℃ (ukubola).
I-L-Threonine CAS 72-19-5 yeBakala yeParma (USP)
Igama leMveliso: L-Threonine
Iimpawu zeMveliso: Ayinasiphunga, iswiti kancinci, iyanyibilika kwaye ibolile phantsi kwe-256 around, ibolile ngokukhawuleza xa idibana ne-alkali yokunyibilikisa kumaqondo obushushu aphezulu kwaye icotha xa idibana neasidi, inyibilika emanzini, inyibilika kwi-ethanol, ether kunye ne-chloroform.
I-L-Tryptophan CAS 73-22-3 yeFarma yeBakala (USP)
Igama leMveliso: L-Tryptophan
Inkangeleko: Mhlophe ukuya kumakristali amthubi kancinci okanye umgubo wekristallini
Iipropati zeMveliso: Ayinaphunga, inomsindo kancinci. Kancinci ukunyibilika emanzini, kuncinci kwi-ethanol kwaye inyibilike kwi-chloroform, kodwa inyibilike kwisisombululo se-sodium hydroxide okanye i-hydrochloric acid, kwaye inyibilike ngokulula kwi-formic acid. Fumana umbala xa sele ubonakalisiwe ekukhanyeni ixesha elide.
L-valine CAS 72-18-4 yeFama yeBanga (i-USP)
Igama leMveliso: L-Valine
Iipropathi zeMveliso: Ayinasiphunga, ingcamla iswiti kodwa iyakrakra emva koko, inyibilika emanzini kwaye ayinakunyibilika kwi-ethyl alcohol
L-Phenylalanine CAS 63-91-2 kwiBakala lePharma (USP)
Igama leMveliso: L-Phenylalanine
Inkangeleko: mhlophe ukuya kumhlophe ocoliweyo ocoliweyo
Iipropathi zeMveliso: Kancinci nje ukuvumba kunye nokukrakra. Uzinzile phantsi kobushushu, ukukhanya kunye nomoya
I-L-Methionine CAS 63-68-3 kwiBakala lePharma (USP)
Igama leMveliso: L-Methionine
Inkangeleko: Amakristali amhlophe okanye i-Crystalline Powder
Iipropathi zeMveliso: Ukuvumba okhethekileyo kancinci, ukukrakra kancinci kwincasa. Indawo yokunyibilika: 280 ~ 281 ℃. Ayizinzanga kwiiasidi ezinamandla. I-Soluble emanzini, i-ethanol efudumeleyo, isisombululo se-alkaline, okanye i-acid ye-mineral. Ingenakunyibilika kwi-ethanol, phantse ingenakunyibilika kwi-ether.
I-L-Leucine CAS 61-90-5 kwiBakala lePharma (USP)
Igama leMveliso: L-Leucine
Iimpawu zeMveliso: Ngcamla krakra kancinci, unyibilike emanzini, Uncibilike kancinci etywaleni, unganyibiliki kwi-ether.
I-DL-Methionine CAS 59-51-8 yeBakala yePharma (USP / EP)
Igama lemveliso: DL-Methionine
Inkangeleko yomgubo omhlophe wekristalline
Iimpawu zeMveliso: Indawo yokunyibilika ye-276-279 ℃, Inyibilika emanzini, Kunzima kakhulu ukunyibilika kwi-ethanol, Phantse inganyibiliki kwi-acetone ethanol.
73-32-5 L-Isoleucine, I-L-Valine 72-18-4, Ukutya kwezilwanyana, L-Threonine Pharm kwiBakala, Ikhemesti yeBakala L-Leucine, L-Threonine kwiBakala lokutya,